चम्किँदै सस्तो बजार, ब्रान्डेड सामान बेच्नेहरुको रुवाबासी
सस्तो बजारभित्र बर्षौंदेखिको गैरकानूनी धन्दा : कर प्रशासन, श्रम कानूनदेखि ट्रेडमार्कलाई चुनौती
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले रोल्पाको ताप्लाबजार र सिराहाको कल्याणपुरमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । थप २ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा आएसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या २२९ पुगेको छ । बैंकले रोल्पा ज...
निर्धन उत्थानले समस्यामा परेको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सात हजार २ सय ५० सदस्यलाई दियो अनुदान
काठमाडौं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उद्योगका लागि सरकारी स्वामित्वको जग्गा लिजमा दिने बाटो खुला हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७७ मा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । नियमावलीको सो मस्यौ...
लकडाउन र लगत्तैको निषेधाज्ञाले उद्योगधन्दा चौपट
काठमाडौँ । यतिखेर मुलुक कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जर्जर अवस्थामा छ । १२० दिन लामो लकडाउन र लकडाउन पछिको निषेधाज्ञाले समेत कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेन । हाल दैनिक २ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमणका केसहरू आइरहेका छन् भने अहिले सङ्क्रमणको मुख्...
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको विवाद
अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. खतिवडा
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडको संचालक समितिको ४६० औं बैठकले आ.व. २०७६/७७ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत लाभांश (रू. १ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैठकले उक्त प्रस्तावित लाभा...
तीव्र सङ्क्रमणबीच विदेशी पर्यटक आगमन खुला
हाम्रो पात्रोमा अब आफूलाई मनपर्ने समाचार स्रोत रोजेर पढ्न पाइने, कसरी प्रयोग गर्ने ?
अब अनिश्चितताबाट अर्थ मन्त्रालय मुक्त !
‘पेन्सन प्रतिस्पर्धा’मा २ सरकारी कोष, कुनमा लगानी गर्दा बढी फाइदा ?
चलायमान भएन दसैँ अर्थतन्त्र
कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा, २० वर्ष अघि फेल भएको व्यवस्था सफल होला ?
क्रसर उद्योगको जथाभावी सञ्चालनमा सरकारको अंकुश
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बहस : संगठित नहुँदा निक्षेपकर्ता अन्यायमा
Japanese Yen ११.३४ ११.४०
Chinese Yuan १७.२४ १७.३२
Saudi Arabian Riyal ३२.४५ ३२.६१